सिस्नुले किन पोल्छ ? ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 8:36 PM
हमीमध्ये कतीलाई सिस्नुले पोलेको पनि होला । विद्यालयमा सजाय स्वरूप सिस्नो पानिले हान्ने गरेको पनि हामीले थाहा पाउदछौ । कुनै अवस्थामा सिस्नुरो पोलाई अत्यन्त पिडादायक पनि हुन्छ । आखिर किन पल्दछ त सिस्नुले ?
सिस्नुका हाँगा र पातमा स-साना रौं जस्ता काडाहरू हुन्छन् । यी काडाँहरूको टुप्पो तीखो र फेद फक्रेको थैली जस्तो हुन्छ । यस्ता थैलीमा फर्मिक एसिड भन्ने एक प्रकारको अम्ल हुन्छ । हलुको ढङ्गले मात्र छोयो भने पनि काँडाको टुप्पो हाम्रो छालामा छिर्छ, काँडा भाचिन्छ र हाम्रो छालामा टाँसिएर आउँछ । काँडामा भएको फर्मिक एसिड हाम्रो छालामा पस्दछ र हामीलाई पोलेको अनुभव हुन्छ ।
Categories: रसायन, शरीर